XOG CULUS”Muxuu Axmed Madoobe Kala Noqoday Magaalada Nayroobi | Wardoon Wardoon.net - Somali News
XOG CULUS”Muxuu Axmed Madoobe Kala Noqoday Magaalada Nayroobi
Madaxwaynaha Maamulka Jubbaland Sh Axmed Maxamed Islaam, ayaa Magaalada Naroobi safar uu maalmo ku joogay wax uu kulamo la qaatay qaar kamid ah Safiirada dalalka Yurub,waxayna kulanka Safiiradu ka jawaabeen Codsi uu u jeediyey Madaxwayne Axmed oo ahaa in,dhaqaalihii Baarlamaanka Jubbaland ee ay horey u balan qaadeen ay bixiyaan.
Sida aan ku helay Xogta Waxay Safiirada Midawga yurub, sameeyeen balan qaad xiliga ay bixinayaan,iyo in Madaxwayne Axmed ay isugu yimaadaan Kulan danbe,intii uuna dhici kulankii danbe ee Madaxda iyo Safiirada ay isugu imaan lahaayeen ,ayaa waxaa dhacay Mooshinkii ay Baarlamaanka Jubbaland ka geeyeen Baarlamaanka DF Soomaaliya,kaas oo nadiijadiisu noqotay in,ay sheegaan codkii loo qaaday iyo kalsooni kala noqosho.
Madaxwaynaha Maamulka Jubbaland ayaa xiligaas u timid, fariin adag oo ka soo gaadhay Safaaradaha Midawga Yurub, waxaana loo sheegay in Barnaamijka Baarlamaanka Jubbaland oo xal aan laga gaadhin,in Dowladdaha Midawga Yurub ayna bixinaynin dhaqaalo,arinta ayaa Madaxwaynaha Axmed Madoobe ku noqotay mid Socodaalkisiii kala dhantaashay,wuxuuna qorshihiisu ahaa in Marka arintaas uu meel saaro uu aado dalka Ethiopia.
Xogta aan ka helay Magaalada Kismaayo ayaa iyana sheegaysa in,Madaxwayne Axmed Madoobe uu ku wargaliyey Wasiirada iyo Xubnahan Baarlamaanka Jubbaland halka xaaladu marayso iyo in,ayna jirin wax dhaqaalaha oo Dowladdaha reer galbeedku Jubbaland Siiyaan,wuxuuna ooga Xog waramay dhibaatada uu Mooshinka Baarlamaanka DF Soomaaliya ku keenay Geedi Socodkii Jubbaland.
War-Murtiyeedkii ay soo saareen Wadamada Caalamka ee Magaalada Muqdisho ka soo baxay ayaa isana ay ku cadahay in heshiis iyo is afgarad laga gaadho,xaalada Jubbaland,waxayna taasi tilmaan u tahay meel hadii muran Siyaasadeed ka jiro in ay adag tahay in Beesha Caalamku ay bixiso taageeradeeda dhaqaalo iyo mid aqoonsi midna.